Dashlane, muchinjikwa-chikuva password maneja | Linux Vakapindwa muropa
Mamaneja ephasiwedi anowanzo kuita sarudzo huru.n kune avo vanoda shandisa mapassword akasimba uye akasarudzika ewebhusaiti yega yega, email services, digital banking, social network nezvimwe, kunyangwe iri zvakare chishandiso chakanaka kune avo vasingade kunetsekana nekurangarira mapassword uye vanongoda kutanga chikamu nekamwe chete.
Nhasi ngatitaure nezvaDashlane, inova password password yeLinux, Mac uye Windows. Izvi functions seyekuwedzera browser yeFirefox, Chrome uye mamwe mabhurawuza uye anovimbisa kuchengetedza mapassword akachengeteka mune yakavharidzirwa gore dhatabhesi.
Pakati pezvinhu zvinonyanya kuzivikanwa Dashlane, tinogona kuwana:
Unogona auto-zadza mapassword muwebhu browser.
Kwete chete inobata mapassword, inogona zvakare kunyorera manotsi uye zvinyorwa mune password password.
Iyo ine "Identity Dashibhodhi", iyo inoshuma kana mapassword emushandisi akambokanganiswa mukutyora kwekuchengetedza.
Dashlane inosanganisira VPN iyo inoitirwa kushandiswa kana mushandisi achibatana neruzhinji network (mapaki, maresitorendi, mahotera, nezvimwewo)
Dashlane anochengetera mapassword uye anoachengeta akavandudzwa pane akasiyana madhijidhi uko account yemushandisi yakabatana (foni, makomputa, mapiritsi uye zvimwe zvishandiso).
Iyo ine sarudzo yekugadzira yakasarudzika mapassword emamwe ese ega, emushandisi maakaunzi.
Pamusoro pazvo, Dashlane ane yakaoma mutemo we-log-log, nawo ruzivo rwakanyorwa nemushandisi, senge zita rako, kero, nhamba yefoni, uye ruzivo rwekubhadhara ichave yakavharidzirwa uye inochengetwa imomo pane chako kifaa, uye zvakare mugore reDashlane.
Zvino, yeruzivo rwakanyanya kukosha, ndeipi email uye tenzi password haana kuchengetwa chero kupi.
Ukuwo, mukati mezvakaipa zveiyi password password izvo munhu anogona kuwana ndizvozvo inongobvumira chete kuchengetedza makumi mashanu mapassword uye yemahara auto-yekuzadza mafomu pane imwechete kifaa, sezvo uyu password password achibata Freemium modhi iyo inosanganisira zvese yemahara tier uye yekutanga kubhadhara.
Chimwe chinopesana nacho chine icho haina rutsigiro rwezvakawanda-chokwadi chechokwadisezvo isingatsigire biometric kuvimbiswa senge chigunwe cheminwe kana kuzivikanwa kwechiso, kunyangwe ivo vachipa maviri-factor chokwadi.
Pakupedzisira, imwe yekupedzisira poindi yakaipa (yeLinux) ndeye zvinosiririsa kuti Dashlane's password manager haienderane neLinux neyakajairika application.
Kubva panguva yacho iyo chete nzira yekuishandisa paLinux ine yayo browser yekuwedzera yeGoogle Chrome neMozilla Firefox. Kunyangwe ivo vanogadzira vasina kutaura nezve chishandiso chemuno, Dashlane yanga isingaenderane neLinux makore mashoma apfuura, kudzamara vashanda pane yekuwedzera browser, zvingave zvakafanira kumirira kusimbiswa kweapp yekuzvarwa.
Maitiro ekuisa Dashlane paLinux?
Kune avo vanofarira kuyedza iyi password password mubhurawuza ravo rewebhu, sezvataurwa Dashlane parizvino anongoshanda paGoogle Chrome neMozilla Firefox.
Y ingo tsvaga iyo yekuwedzera mukati memapakeji Catalog yebrowser yedu kuti ikwanise kuisa Dashlane pairi.
Kana kune rimwe divi kana uri Google Chrome mushandisi, unogona kuisa Dashlane kubva chinotevera chinongedzo.
Nepo kune avo vari vashandisi veFirefox, ivo vanofanirwa kuenda kune inotevera chinongedzo.
Waita izvi pane peji rekuwedzera, ninokumbira iwe kuti unyorese mubasa Kana usati watoita kudaro, zvikasadaro ingopinda.
Panyaya yekuve kekutanga, ivo vanofanirwa kuzadza iyo yakakodzera data uye panguva yekunyora account yavo, Dashlane inokukumbira iwe kuti upe password password, iyo inoshanda se password inokiya mamwe ese mapassword mu "vault." Izvo zvakakosha kuti iyi tenzi password inorangarirwa sezvo iri iyo yavanoshandisa nguva dzese pavanenge vachida kushandisa sevhisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Dashlane, muchinjikwa-chikuva password maneja
Maitiro ekuisa Chromium OS pane Raspberry Pi?